Borosy Photoshop 10 maimaim-poana, mbola tsy navotsotrao ve izy ireo? | Famoronana an-tserasera
Borosy Photoshop maimaim-poana
Jose Angel | | borosy, dia midika hoe
Ny fiainantsika mamorona amin'ny alàlan'ny haitao nomerika dia ho voafetra be kokoa raha tsy noho ny fanampiana izay manome borosy ho antsika. Izany no zavatra tiako mamorona, fantatrao. Saingy noho ireo sehatra sy ireo mpampiasa namorona azy ireo dia afaka manana loharano tsy voafetra izahay.
Ary vao mainka misaotra fa afaka ny maro amin'izy ireo. Na, raha mahita ny tenanao voaofana ianao dia afaka mahazo fiverenana ara-toekarena amin'ny famoronana azy ireo. Zavatra toa sarotra, mety tsy dia izany, miaraka amin'ny faharetana sy fanoloran-tena kely. Na eo aza izany, ho an'ireo olona mbola tsy nahazo fiofanana momba izany dia mitondra vitsivitsy aho borosy Photoshop maimaim-poana..
1 Borosy mipoaka
2 Series Nagel
4 Boribory sy faribolana maro hafa
8 Ho any amin'ny solaitrabe!
9 Vokatry ny ra
11 Raha sahy ianao dia ity misy torolàlana haingana amin'ny famoronana borosy
Misy borosy 16 miaraka amin'ny vokatry ny fipoahana. Tany am-boalohany dia tsy hahita azy ireo zavatra vokatry ny fipoahana toy ny sary ianao, fa «gradient»Na simbaina hilalao miaraka amin'ny firafiny sy ny valiny tadiavinay. Ohatra, raha miditra tsotra fotsiny amin'ny vokatry ny fipoahana borosy isika dia hampiseho setroka tsotra volondavenona. Fa raha ampidirintsika ny gradient tafiditra, dia hanome fikitika tena azo antoka kokoa isika.
Ity fonosana misy borosy fito ity manolotra endrika manokana momba ny tontolo iainana. Manokana fomba efatra samihafa amin'ny tontolo voajanahary. Izay mamokatra firafitra samihafa amin'ny fomba maivana sy malefaka ary amin'ny sisiny tsy ara-dalàna. Ahitana pensilihazo arina manify sy tsindry ary borosy maina.
Moon, dia an'ny borosy 'majia' andiany izay noforonin'ny mpanoratra telo samy hafa. Ity iray ity dia momba ny volana, araka ny anarany. Saingy tsy ny rehetra dia endrika boribory miaraka amina endrika izay mahatonga azy hitovy amin'ny volana, misy endrika hafa kokoa fa mifandraika amin'io alina io izay toa avy amin'ny tontolo avatar. Tsy mandany fako izy ireo.
Boribory sy faribolana maro hafa
Brusheezy dia pejy natokana hanomezana ny ankamaroan'ny fitaovany. Na dia premium aza ny hafa ary azonao atao ny mividy azy amin'ny vidiny mirary. Ireo dia borosy 20 misy endrika boribory samy hafa sy manana habe samihafa. Ary araka ny fantatsika rehetra ankehitriny, afaka mandamina ny habeny sy ny endriny isika. Ity karazana borosy ity, miaraka amin'ny fomba fampifangaroana sasany, dia afaka mamorona vokadratsy ho an'ny sarinao.
Indraindray mila loko kely ny rindrina. Na koa ny toetra amboarintsika, iza no mahalala. Ireo dia borosy splatter isan-karazany misy endrika samihafa.
Vokatry ny fanaparitahana
Ireto dia borosy Photoshop iraika ambin'ny folo miaraka amin'ny haben'ny 2500 px izay mifantoka ihany koa amin'ny lamin'ny fanontana hanomezana endrika maloto ny volavolanao.
Hatramin'ny 21 ireo borosy samihafa izay hapetrakao amin'ity .ABR tsotra ity ao amin'ny photoshop anao Izy ireo dia azo ampiasaina tsirairay na mifangaro iray eo ambonin'ilay iray hafa. Toy ny ohatra amin'ny: Photoshop Basic: Ahoana ny fomba hamafana ny ampahany amin'ny sary. Amin'izay ny sary voalohany dia mipoitra setroka avy amin'ny tatatra. Nampiasaina tamin'ireto borosy ireto izy ireo ary tamin'ny fomba namboarina.
Ho any amin'ny solaitrabe!
Azo antoka fa raha mpampianatra ianao na ny asanao dia misy ifandraisany amin'ny fanabeazana ary na dia ny famerenana amin'ny laoniny aza dia mila mahita ilay borosy ianao indraindray izay toa anao manoratra eo amin'ny solaitrabe. Ireo borosy ireo dia hanampy anao hanao izany. Na dia miara-miasa amin'izy ireo amin'ny lahatsoratra aza ianao dia afaka mamorona endritsoratra manokana tsy manam-paharoa, izay tsy maharary velively. Ahitana borosy 12 samihafa.
Vokatry ny ra
Ataovy mirehareha i Tarantino ny anao misy ity ra ity. Tena mahasarika maso izy ireo ary misy ny zava-misy. Azonao atao ny manefy azy ireo tsy ho ra fotsiny, fa koa toy ny loko akrilika na loko eo ambanin'ny hazavan'ny UV.
Vokatry ny rà mamirapiratra
Ny borosy abstract rehetra dia afaka manome ny maha-izy azy ny sary raha ampiharinao tsara izy ireo. Saingy tsy izy ireo ihany no ampiasaina amin'izany, manova ny borosy tsirairay azonao atao ny manatratra ny vokatra ilainao amin'ny fakana sary anao. Na dia ampiasainao amin'ny sary fampakaram-bady aza dia mety ilaina amin'ny jiro. Andramo dia ho gaga ianao.
Raha sahy ianao dia ity misy torolàlana haingana amin'ny famoronana borosy
Mamorona borosy amin'ny fitaovana Photoshop avy amin'ny sary na sary misy refy izay 2500 x 2500 teboka no fetrany, manaova sarina endrika amin'ny antontan-taratasy banga na sosona misaraka miaraka amin'izay fitaovana tianao horesahina. Na miaraka amina endrika sy vilany fandokoana na borosy ohatra.
Avy eo, safidio ny endrika na ny ampahany amin'ilay sary izay mahaliana anao manondro ny fitaovan'ny fifantenana, araka ny tondroin'ilay anarana. Ary hamaranana dia tsy maintsy mandeha amin'ny menio Edit isika; Farito ny sandan'ny borosy. Ao amin'ny boaty manaraka izay hasehonay, safidio ny anarana tadiavina hitehirizana ny borosinao. Hanampy anao koa izany raha te-hivarotra ny asanao ianao amin'ny manaraka. Aza adino fa noho izany dia tsy maintsy miavaka izy ary noforoninao. Hialana amin'ny olan'ny zon'ny mpamorona.
Raha mbola tsy manana borosy ao amin'ny Photoshop ianao hanatanterahana ny asanao sasany, azonao atao ny mijery hatrany eto amin'ny Creatives amin'ny lahatsoratra hafa efa vita na azonao atao ihany koa ny mikaroka amin'ireo pejy nomena an'ity lahatsoratra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Borosy Photoshop maimaim-poana